Soomaalida Wax Heysta Oo Lagu Boorinayo Iney Ka Qeyb Qaataan Hormarinta Waxbarashada Beledweyn “DAAWO SAWIRRADA” | Radio Muqdisho
Soomaalida Wax Heysta Oo Lagu Boorinayo Iney Ka Qeyb Qaataan Hormarinta Waxbarashada Beledweyn “DAAWO SAWIRRADA”
Published on June 1, 2013 by admin · 1 Comment · 6,107 views
Maamulka iyo Macalimiinta gacanta ku haya iskuullo si lacag la’aan ah wax loogu baro Ardayda ku nool magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku booriyey dadka Soomaaliyeed ee wax heysta iney ka qeybqaataan hormarinta Waxbarashada Ardaydaasi.
Iskuulladan Ardayda sida lacag la’aanta ah wax loogu baro ayaa tiro ahaan waxey gaarayaan Seddex Iskuul waxaana lagu kala magacaabaa Hadraawi,Maandeeq iyo Axyaa Wadani ayadoo iskuulladanna ay aas aasen aqoonyahanno reer Beledweyn ah oo iyagu iskood isku xilqaamay iney carruurta aanay awoodin waalidkood iney ka bixiyaan Waxbarashada lacagta ah ay si lacag la’aan ah wax ku baraan.
Maamullaha guud ee Seddexdan Iskuul Ustaad Mubaarak Saneey oo isagu ka warbixiyey xaalada Waxbarasho ee ay Ardaydan wax ku baraan ayaa tilmaamay in iskuulladan oo ku kala yaala Seddex xaafadood oo magaalada Beledweyn ka tirsan ay wax ku bartaan arday tiradoodu gaareyso 900 kuwaasi oo isugu jira wiilal iyo gabdho islamarkaasina ay si lacag la’aan ah wax ku bartaan.
Mubaarak maamullada guud ee iskuulladan ayaa tilmaamay in macalimiinta wax barta Ardaydan ay yihiin kuwo si iskood ah isku xilqaamay oo aanay jirin cid lacag ku siisa waxbarida carruurtan,hadafka ay ka duulayaanna uu yahay in wixii ay soo barteen ay uga faa’ideeyaan ubadkooda maadaama ay ubadku yihiin mustaqbalka Dalka.
Hadaba xaalada ay wax ku baranayaan Ardaydan ayaa kuwo la dheehan karo inaanay u dhameystirneyn agabkii ay wax ku baran lahaayeen waayo fasallada iskuullada qaarkood uma dhameystirna kuraasta ay Ardaydu ku fariistaan oo qaarkood ayaa dhulka fariista waayo waa carruur ay waalidkood ayaga iyo macalimiinta wax barayaba ay ka go’antahay iney daruuf kasta oo la awoodo wax ku baraan waxaana taasi ay muujineysaa sida ay loogu wada heelan yahay toosinta ubadka.
Ugu dambeyn guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed ee wax heysta gaar ahaanna dadka Qurba Joogta ah ee ku nool dalalka caalamka waxaa lagu boorinayaa iney cid walba uga qeyb qaadato sidii loo hormarinlahaa waxbarashada Ardaydan sida lacag la’aanta ah wax lagu barayo.
Cidii dooneysa iney la xiriirto maamulka Iskuulladan Ardayda sida lacag la’aanta wax loogu baro waxey kala xiriiri kartaa Telefoon nambarradan:- 00252-615509889 ama 00252-616696060.
Photo By:- C/shakuur Cusmaan Cali
guure says:	July 25, 2013 at 3:36 pm	aad iyo aad ayaan agu farax sanahay dadaalka somali ey wadaan meelwalba aad joogtan guul ayaa nii rejena